Linesizotha izimbali zisetshenziswa for engadini (isithombe)
izimbali ezinhle - umhlobiso yimuphi ngesakhiwo. Kodwa lonyaka ukuhlela, ukulungiselela kanye umsebenzi zezimbali entsha - nzima futhi zibiza. Ngakho-ke, abalimi abaningi lula ukuphila kwabo futhi undemanding izimbali zisetshenziswa watshala. Ukunakekela kubo kudinga okungenani, isitshalo uhlala kusukela eminyakeni emi-2 kuya kula mashumi eminyaka (yisimo esifike ngesikhathi sokuhlukanisa ehlathini). Futhi ubuhle linesizotha zisetshenziswa engadini izimbali unyaka akuzona eliphansi, futhi ngokuvamile ubadlula. Nokho, ake sicabangele ongakhetha okufaneleka kakhulu kunokunye.
Lokhu okuthembekile undemanding izimbali zisetshenziswa for engadini, okuyinto akasoze akuvumele wehluleke. Faka isicelo ama, ukuqhakaza ngasekuqaleni, maphakathi noma ngasekupheleni entwasahlobo, kuncike ezihlukahlukene. Izimbali kufanele ngamapayipi central (Corolla) lizungezwe collar amacembe, okungaba umbala ezahlukene, isb, ophuzi, osawolintshi, mhlophe, zibe bomvu, futhi peach. Ezinye izinhlobo inephungana olubucayi. Iqiniso ukuthi daffodils abaphapheme, uzofunda we amahlamvu mncane ewumngcingo ukuthi ziyaphuma phansi ngokushesha njengoba ilanga prigreet. Ekugcineni bahlangana kancane emifushane kuka izimbali.
Lapho uthenga, khetha ama enhle enempilo akuyona yomile. Okokuqala daffodils kangcono isitshalo, kungakangeni ubusika, futhi esikhathini esizayo ukwabelana esihlalweni futhi ezihlabayo ehlobo ekuqaleni, lapho ngokugcwele amaqabunga awo liyobuna. Bulb bangcwabe emhlabathini 5-7 cm. Ngoba ukutshala ukhethe izindawo libalele noma kancane ukubopha.
ukunakekelwa ephakeme ulula: isitshalo kufanele sinamanzi amaningi ngesikhathi izimbali, uma imisiwe - feed. Ukuze umoba mncane ekuweni umoya, ngezinye izikhathi udinga ukwesekwa. Lapho efihlekile ibuna kufanele linqunywe.
Esinye isitshalo okulula ukunakekelwa ukuthi ubukeka umxhwele kakhulu. Kuyinto undemanding nenhlabathi, cishe awekho KWAMAGUNDANE izinambuzane. igama Daylily Latin ihumusha ngokuthi "ubuhle ngosuku" ngoba izimbali ihlumela ekuseni buyabuna ebusuku. Kodwa ungakhathazeki, kwesinye isiqu kungenzeka kufika ku-12 ezikhiqiza amaqanda, ukuze isitshalo ziyojabula ne izimbali zawo ziwukudla zabo amasonto amaningana.
Daylily uyindawo ezahlukene, ngakho ingasetshenziswa ngezindlela ezihlukahlukene: ku curbs, wokubukisa ngamaqembu ahlukene noma flowerbed ngemuva.
Abalimi alethwe ngokoqobo izinkulungwane izinhlobo zalesi sitshalo, okuyinto azigcini nje ngokuhluka usayizi nombala of izimbali, kodwa futhi ifomu yabo, inkathi zezimbali. Olunye uhlobo ibe yinde noma kwenzeka kabili isizini.
Lesi sitshalo kudinga okungenani emahoreni angu-6 elangeni, kodwa qiniseka shading, kungenjalo bayokudla niyishise izifunda ezishisa izimbali ngemibala egqamile. Inhlabathi kumele kube esemanzi kodwa kahle akhanywa. Kungcono ukutshala entwasahlobo Daylily ukuthi baqina, kungakangeni ubusika. Kodwa uma ezinzima abandayo, khona-ke ngonyaka wokuqala, kuba okungcono ukumba umthombo, noma okungenani afihle ukubuya ukushisa.
Schedro umquba umhlabathi ngaphambi kokutshala, shiya ngokwanele (30-60 cm) isikhala phakathi izithombo. Bury isibani akuyona ezingaphezu kuka 2-3 cm. Ngonyaka Daylily kuqala ukhetho ikakhulukazi mayelana ukuthambisa, khona-ke izimo ozinzile futhi kunzima.
Lapho usungaphakathi uqaphela ukuthi isitshalo ukuthi ngaphansi ukuqhakaza, kungase-signal ukuphila yokuthi Wafikelwa "izingane" eziningi kakhulu, sekuyisikhathi ukwabelana. Ngokuvamile lokhu kwenzeka emva kweminyaka 3-5 emva zokutshala. Ukusebenza futhi arcade kwenziwa entwasahlobo.
Uma udinga izimbali zisetshenziswa, linesizotha, nge ifomu ezithakazelisayo ihlumela, ukunambitheka obucayi nangamandla emangalisayo, la ubuhle - okukhethayo best.
Irises babe amacembe ezintathu ezinkulu yangaphandle, okufuna phansi, futhi abathathu ingaphakathi mpo. Lo mqeqeshi owake wapheka kungaba nesilevu Fluffy noma scallop. Eza ngemibala ehlukene kanye nosayizi.
iris Iningi blooms kanye - ekuqaleni ehlobo. Abanye, ikakhulukazi nzalo ka darnel, kukhona remontant futhi eziqhakaza futhi emuva kwesikhathi.
Irises badinga indawo libalele futhi inhlabathi saqotshwa kahle. izimbali itshalwe phakathi - ekupheleni kwehlobo olubanzi imithombo engajulile. I rhizomes zishiywa zivuliwe kusezweni phezulu noma kancane pritrushivayut ezifundeni ashisayo. Ngempela, ngokungafani kuya isibani, okuyilona elidingekayo ukuze ngingcwabe emhlabathini, bona ziyazithanda elangeni futhi kungenzeka ukubola ngaphansi kwenhlabathi.
Lezi zimbali undemanding zisetshenziswa Kulula kakhulu anakekele. He is ukuthambisa ngokucophelela, inhlabathi amanzi, futhi kungaba Ungeqisi it ne umquba. izimbali Old bafa lapho basuke wilted futhi amahlamvu kwesokunxele - bayaqhubeka okondliwa kulo izimpande kuyo yonke inkathi. Uma eminyakeni 2-5 ehlathini ukwabelana kanye isihlalo.
Lona limnandi undemanding izimbali zisetshenziswa for engadini. Photo peonies e yonke inkazimulo yayo ugqozi kulinywe yabo.
Futhi emva izimbali ezinhle kakhulu iqede, ngeke angenalutho flower embhedeni, futhi isihlahla namanzi aluhlaza, okuyinto ekwindla iyoba umbala obomvu-golden.
Zisetshenziswa angaphila ngisho wena - peony ehlathini siphile iminyaka engu-10. Izitshalo zidinga ukunakekelwa sakugcina ngemva kokuba abatshalwé endaweni enhle akukuhle kukuhlupha, zingabantu kubuhlungu aphendule ukufakelwa.
Lezi zimbali undemanding zisetshenziswa zidinga inala imibala libalele futhi okuxekethile, kahle permeable umswakama. Peonies ungesabi nobusika obubandayo, ngoba Akhuthaza ukwakheka kwe-frost entwasahlobo efihlekile.
Ukuze iqhaza zokutshala rhizomes ngamehlo kusukela omdala (iminyaka 3-5) ehlathini. Izinsuku inqubo - Autumn (September-October), ngaphambi frost kuqala. Indawo kufanele unshaded evulekile, evikelekile emoyeni. Inhlabathi kumele avundiswa kahle. isitshalo itshalwe amehlo ububanzi kahle kuze ka 2.5-5 cm ukujula.
Ngemva kwalokho, njengoba ne Ezikhula iminyaka eminingi eyedlule, ukunakekelwa incane. Zalisa isidingo ehlathini kuphela uma une enhlabathini abampofu kakhulu. Sifike ngesikhathi ayakhala ke, susa egqwalile flower efihlekile wanquma amahlamvu ebusika ukugwema ingozi izifo phezu-ubusika.
Abaningi e nekhabethe lemithi has a tincture zalesi sitshalo. Kodwa emasimini linesizotha izimbali zisetshenziswa akuzona kaningi. Futhi ngeze, ngoba ngisho eziqine ukushisa Echinacea uzokunika izimbali ezinkulu. umbala zabo zakudala - purple nge brown ayizindunduma oyindilinga core, kodwa kukhona izinhlobonhlobo ukuthi babe amacembe obomvu, ophuzi, owolintshi noma amhlophe. Echinacea edonsela izinyoni kanye izimvemvane nge iphunga lawo nokusanhlamvu.
Ngokuvamile, isitshalo zibhebhetheka by imbewu ezihlwanyelwe entwasahlobo, uthanda izindawo libalele futhi inhlabathi evundile. Ukunisela Echinacea kuyadingeka okungenani kanye ngesonto. Entwasahlobo kufanele wenze sigqoka ne umquba semboza ngabo izithombo zezihlahla. I egqwalile flower efihlekile kufanele usike hhayi kuphela ngenkuthalo uvele entsha, kodwa futhi ukuze uvimbele ukusabalaliswa okungagunyaziwe imbewu. Njalo eminyakeni 3-4 ukwabelana sezihlahla. Lesi sitshalo ezivamile ungakhathazeki, ke akathandi.
Lezi undemanding zisetshenziswa izimbali umbhede angase benzela ukunika isibonelo ukubukeka yokubukisa futhi adambise lokunakekela. Izinhlobonhlobo nemibala isisindo, ungahlala ukhetha ezihlukahlukene ukuthi uzoba angajatshuliswa wena. Phlox ukuqhakaza elikhanyayo ibhola elihle ukuthi siqukethe ezincane izimbali ezinhlanu olucijile.
Bakhetha ukuthumelelana izindawo evulekile libalele, kodwa kuzothatha umthunzi kwaphela izihlahla. Asakaze by imbewu noma cuttings.
Lesi sitshalo kufanele itshalwe ocebile, inhlabathi evundile. Shiya-30 cm phakathi imibala ukuze ikhule kahle bona kanye ungagxambukeli nomunye. Abadala izimbali ukusuthiswa umquba kanye amboza phansi elibazungezile. Nakuba engadini phlox kanye nesomiso ukumelana isitshalo (ngoba sivela emkhakheni phlox ezingamelana nezinselele ngaphansi kwezimo ezinzima) amanzi kunconywa okungenani kanye ngesonto. Ebusika, kufanele kuqashelwe yokukhosela.
izimbali Iningi undemanding zisetshenziswa ukuthi eziqhakaza ekwindla
Yiqiniso, kuba Chrysanthemum. Ngo ekwindla, lapho konke uqala fade, bona Explode wavele izimbali okusheshayo. Bona Zihlukahlukene ngesimo, amasayizi kanye nemibala: white, ophuzi, pink, osawolintshi, obomvu, lavender, onsomi futhi ezinemishwe. Kukhona ezihlabayo ekhula ongaphakeme futhi cishe imidondoshiya imitha.
Chrysanthemum zingatshalwa kusuka imbewu, uhlukanisa namahlumela kuyo le mpande, ukulungele ukuthenga izithombo noma izitshalo ezimbizeni. Njalo eminyakeni 2-3 repot kubo kangcono, ukuze sigweme izinkinga nge nezilokazane nezifo. Lesi sigaba ehlathini kungcono ukwenza entwasahlobo. Kuye ngobukhulu bayo kufanele kwenziwe njalo eminyakeni 3-5.
Lezi zisetshenziswa linesizotha flower garden uthando ezindaweni unshaded inhlabathi okuxekethile sandy avundiswa. sigqoka Okwalandela ozikhethela, kodwa ezifiselekayo. Ukuze uthuthukise kumiswa imbali amaqanda, lapho amahlumela afinyelele-20 cm, badinga prischipnut. Ebusika kwezitshalo neziqu ku-20 cm kanye nekhava.
Uma peonies abahlangene ucingo lokugcina, asters Yiqiniso, behlonipha 1 Septhemba kanye noSuku Lothisha. Noma kunjalo, ngemva kokuba eziqhakaza kusukela ngasekupheleni kuka-Agasti kuya phakathi no-October, beza lobehlukene, bobunjwa colorings. Asters - izimbali zisetshenziswa, linesizotha, izithombe imibhede nabo kufakazela indlela ngempumelelo bangabheka.
Imigomo ukunakekelwa kubo njengezindawo ekunakekeleni Chrysanthemums. Ngoba kokubili izitshalo siwuhlobo efanayo Botanical - Asteraceae.
It zingatshalwa njengoba imbewu owahlwanyela ekuqaleni kwentwasahlobo, futhi kusukela izithombo, uma entwasahlobo endaweni yakini kubanda futhi isikhathi eside. Futhi ungakwazi ukuthenga izitshalo avuthiwe izimbiza.
Astra uthanda ilanga egcwele, kodwa zingakwazi ukubhekana nazo ngokuphumelelayo nge Ukufiphaza kancane.
Lesi sitshalo kufanele uyophuziswa okungenani izikhathi 1 ngesonto, ukondla umquba emithonjaneni yonke futhi bavikele ukhula. izinhlobonhlobo Tall tie zezitsha. Pinching eziqongweni futhi linikeza imiphumela emihle.
Ebusika, amahlamvu amadala benqunywa ngokuphelele futhi itheku isitshalo.
Njalo eminyakeni 2-3 ehlathini kufanele ihlukaniswe ukuze Aster laqhubeka lichuma.
Ukuze ezindaweni inkinga
Zonke izitshalo ngenhla zidinga ekuthuthukiseni kahle isikhala welanga. Kodwa lokho ukubeka ohlangothini enyakatho indlu noma ngaphansi kwezihlahla? Nakani Sebawoti - izimbali zisetshenziswa, linesizotha, omuhle kakhulu ezikhulayo emthunzini. Ngaphezu kwakho konke bayazazisa ngoba kwamahlamvu amahle aluhlaza. Nokho, kunezinhlobo eziningi ziyojabula wensimu ngemibala ethandekayo ngemilenze okusezingeni eliphezulu, uphondo emise noma insimbi, ngezinye izikhathi okusikhumbuza lily. Umbala - omhlophe, Lilac noma onsomi. It blooms kusuka ngoJuni kuze Okthoba, kuye ngohlobo lwaso.
Kufanele kuqashelwe ukuthi akuwona wonke izinhlobonhlobo like sethunzi elimnyama. I Umbala lula, izitshalo ngaphezulu zidinga ilanga. Ngakho-ke, ikakhulukazi izindawo ukubopha ukukhetha ezihlukahlukene ne dark, amahlamvu ezijulile-oluhlaza.
Ukutshala imbobo kufanele kube kaningi umquba. Nakuba lesi sitshalo usemncane, kudinga eningi umswakama, kodwa qiniseka ukuthi angami. Esikhathini esizayo, amabutho azijabulela kokuphuza esifike ngesikhathi, kodwa abadala izimbali evamile ukubekezelela nesomiso emfushane.
ukunakekelwa zezitshalo esakhiwa ngo yokudla entwasahlobo, ukuvikelwa slugs kanye endlwaneni encane ebusika. Usokhaya ikhula kahle endaweni eyodwa iminyaka eminingi, empeleni, amahlathi abo amandla aphelele kuzovula akukho ngaphambili kunalokho engikuthole eminyakeni engu 3-6 emva kokutshala. Share it ozikhethela, uma ufuna ukuba asakaze simila.
Lawa Ezikhula iminyaka eminingi kuhlobisa engadini yakho futhi musa ukuletha kokuhlupheka.
Bells zokutshala zisetshenziswa nokunakekela. Growing izimbali engadini
Izindlela eziningana zokupheka inyama nama-mushroom kuhhavini
Ungazelaphi "Kiwi" inombolo -koshelka. Wazi kanjani ukuthi "Kiwi" akhawunti inombolo -koshelka
Ukufunda itshe Garnet
Zabesifazane ubuthakathaka: Reality futhi Izinganekwane